डीआरको छक्कै परेंमा सरोज र आश्मा : RajdhaniDaily.com
Home Not-to-be-missed डीआरको छक्कै परेंमा सरोज र आश्मा
काठमाडौं । लकडाउन खुकुलो भएपछि सक्रिय भएको कार्टुन क्रु समूहको एकपछि अर्को म्युजिक भिडियो आइरहेको छ । यसैक्रममा कार्टुन क्रुका जोडी सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्माको नयाँ भिडियो बुधबार रिलिज भएको छ ।
गीत लेखेरै गिनिज अफ वल्र्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाइसकेका गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत छक्कै परें…को भिडियोमा सरोज र आश्माको अभिनय रहेको छ । ठेट नेपाली शब्दहरूको प्रयोग गरिएको गीत रोमाञ्चक बनेको छ ।
गीतकार उपाध्यायले यसपटक आफ्ना यो गीतको भिडियोमा निकै मिहिनेत गराएका छन् । गीत लेखेर नै गिनिज अफ वल्र्डसहित विश्वका १५ वटा विश्व रेकर्ड बनाएका उपाध्ययको विगतको गीतको भिडियोभन्दा यो भिडियो केही पृथक् बनेको छ ।
यो गीत विष्णु भट्ट र विना भट्टराईको स्वरमा रहेको छ । जसमा विष्णु भट्टकै संगीत छ । डान्सिङ जनराको यो गीतको भिडियोमा कलाकारहरूको आकर्षक नृत्य छ । आश्मा र सरोजले विभिन्न नृत्य कलाकारका साथ ऊर्जायुक्त डान्स प्रस्तुत गरेका छन् ।
यो भिडियोलाई माइकल स्टेप अप एन्ड आर्ट्स एकेडेमीका सञ्चालक कोरियोग्राफर माइकल चन्दले निर्देशन गरेका छन् । उत्सव दाहालले खिचेको यो भिडियोमा सिलन लम्सालको सम्पादन छ । यो गीतको भिडियोलाई डीआर म्युजिक एन्ड क्रियसनको युट्युब च्यानलबाट रिलिज गरिएको छ । उनले गीतमा सरोज र आश्मालाई नृत्यको फरकफरक स्टेपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कोभिडसँग जुध्न राष्ट्रिय सरकार : प्रधानमन्त्री
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - May 21, 2021 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्व महामारी कोभिड नियन्त्रणका लागि सबै दल सम्मिलित ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठन प्रस्ताव गरेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय...
प्याङथलाेमा सबैको भलो हुने भवन बन्दै
प्रदेश Dhruba Lamsal - August 30, 2020 0
चापागाउँ (ललितपुर) । प्राचीन बस्ती प्याङगाउँमा सामूहिक कार्य र संस्कृति जगेर्नानिम्ती सामुदायिक भवन निर्माण अघि बढेको छ । ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–११ को पराम्परात बस्तीमध्येका एक...
प्रदेश Sushila Bishwokarma - February 17, 2020 0
बिन्दा पाण्डेको ‘समानताका पाइलाहरू’ बजारमा
प्रदेश Dhruba Lamsal - March 8, 2020 0
काठमाडौं । काठमाडाै विश्वविद्यालयको शिक्षा सङ्कायबाट विमेन इम्पावरमेन्ट इन पोलिटिक्स विषयमा विद्यावारिधि गरेकी बिन्दा पाण्डेको पुस्तक ‘समानताका पाइलाहरू : राजनीतिक आन्दोलनको महिलावादी विश्लेषण’ अन्तर्राष्ट्रिय...
प्रदेश १ Sushila Bishwokarma - August 11, 2020 0
संखुवासभा । संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका–२ गोगनेमा सडक माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर एक जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा मकवानपुरका जिल्लाका ३०...
Breaking News Sushila Bishwokarma - July 25, 2020 0
सप्तरी । सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको आकस्मिक कक्ष आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । विष सेवन गरी भर्ना भएका एक बिरामीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि...
मुम्बई । भारतमा जारी लकडाउनका कारण सम्पन्न व्यक्तिका घरमा बाहिरबाट कामदार आउन सकेका छैनन् । जसका कारण कतिपय सेलिब्रेटी आफैंले घरको काम गर्नुपरेको छ...
मध्यान्नअघिसम्म संक्रमणबाट नेपालमा थप ९ को निधन
Breaking News Kumar Raut - November 10, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट आज मंगलबार मध्यान्न अघिसम्म नेपालमा थप ९ जनाको मृत्यु भएको छ । झापामा ३, रुपन्देही र बर्दियाका २–२ र दाङ...